Blasting Abrasives Fekitori, Vatengesi - China Blasting Abrasives Vagadziri
Simbi yakapfurarakagadzirwa kubva kabhoni simbi nekunyungudika uye kuumba. Inoshandiswa zvakanyanya seabrasives yekuchenesa, kubvarura, kugadzirira kwepamusoro uye kupfura peening. Hukuru hwayo hwakasiyana huchaona iyo ultiate yapera kuwanikwa pamusoro peiyo workpiece inoputika.
Simbi grityakapwanyika kubva pakakwirira kabhoni simbi kupfura, inowanikwa kwemhando nhatu dzekuoma ine angular chimiro, iyo kubviswa kwenzvimbo yakasviba uye kupfeka nekukurumidza uye zvine mutsindo.
Kubereka simbi grit
Kubereka Steel Gritchinoitwa nokupwanya ndokugadzira ndokutakura simbi. Inotanga kugadzirwa uye kushandiswa kweiyo dombo rekucheka indasitiri uye ikozvino zvakare inogamuchirwa kuitira iyo yekuputika maitiro nekuda kwayo kwakawanda kuita.
Sponge midhiya abrasives
Sponge Media hashainowanikwa mumhando dzinopfuura makumi maviri, kuwana ma profiles kubva ku0 kusvika 100+ micron. Zvese zvinotsvaga yakaoma, yakadzika guruva, yakaderera rebound blasting.
Isu tinopa simbi yakatemwa waya kubva kune itsva simbi waya uye yekare taya waya zvese.
Kuchengetedza kwakanyanya kuneta hupenyu pasi pesimba rakakwirira, kudzikisa mashandisiro emari.
Zviyo zvakanaka kutenderera, saizi saizi, hapana kutyorwa panguva yekushandisa, yepamusoro pfuti peening mhando.
Yakawanda inodhura-inoshanda kana ichishandiswa kupfura peening yezvikamu zve medchnical nehurema huwandu hwe HRC40-50.
Stainless Simbi Cheka Wire Pfurainoitwa nekucheka tambo yesimbi isina chinhu mu mapellets. Inogona kuenderera mberi ichigadziriswa mumakero akasiyana maererano nevatengi mashandisirwo akasiyana.
Stainless simbi grit ndiye Stainless simbi angular PARTICIPLE. Inonyanya kushandiswa kuchenesa pamusoro, kupenda kubvisa uye kuburitsa simbi dzisingaiti uye zvigadzirwa zvesimbi isina chinhu, zvichiumba yunifomu yepamusoro roughness, nekudaro inonyanya kukodzera kugadziriswa kwepamberi pamberi pekupfeka.
TAA yakaderera kabhoni bainite simbi yakapfura inonziwo LCB simbi yakapfurwa.
Seye anotungamira kugadzira mu feld ye simbi hasha, TAA Metal inoomerera mukuvandudza mhando yechigadzirwa nekuvandudza chigadzirwa chitsva mumakore apfuura. TAA LCB yakabvisa hasha chigadzirwa chepamusoro-soro mushure mekutsvagisa kwemakumi gumi-makore uye kusimudzira, inova mubatanidzwa wakakwana weTAA petent matekinoroji uye matekinoroji epamhepo, AS iyo inodiwa bara yekuputika midhiya, TAA LCB yakavhenganiswa hashaishandiswe kuatl minda ine chekuita nekupfura nenyunje uye nekuputika kwejecha. Kuita kwaJt kwakanakisa kunogona kubatsira vashandisi kusevha makumi mashanu muzana epfuti yavo yekupfura mutengo.
Aluminium yakatemwa waya
Aluminium yakatemwa waya kupfura anonziwo as aruminiyamu kupfura, aluminium marozari, aluminium granules, aluminium pellet.
Zinc yakatemwa waya
Zinc yakatemwa waya kupfura inonziwo zita zinc kupfura, zinc pallet, zinc marozari, zinc kucheka-waya kuputika. Iyo yakapfava kupfuura simbi, simbi isina simbi, cast kana kutema zvigadzirwa zvematare.
Brown aluminium oxideinosanganiswa uye yakaumbiridzwa pasi pekupisa kwakanyanya kubva musanganiswa webauxite uye zvimwe uye nezvimwe zvigadzirwa. Iyo inoratidzirwa nehupamhi hwekuoma kwayo, kuomarara kwakanaka uye chimiro muhukuru.
Mhangura yakatemwa waya
Mhangura yakatemwa waya kupfurainogadzirwa nekucheka kubva kune waya yemhangura kuita mapellets, iyo urefu hwakaenzana nehupamhi hwetambo. zvinonyanya kushandiswa pakurapa kwepasirese. Izvo zvinodaidzwawo semhangura kupfura, ndarira yakatemwa waya kupfura, mhangura kupfura sekucheka, mhangura marozari, mhangura granules nezvimwe zvinogona kushandiswa zvese sekucheka kana kugadziriswa mafomu epfuti.